आजदेखि आकाश बिस्तारै खुल्दै जान्छ » असल खबर
आजदेखि आकाश बिस्तारै खुल्दै जान्छ
केही दिनदेखि काठमाण्डौको आकाश धुम्मिएको छ । श्चिमी वायुको थोरै प्रभाव देखिएकाले हिजो बेलुकादेखि नै आजदेखि अलि सुधार हुने देखिएको छ । पश्चिमी वायुको थोरै प्रभाव देखिएको भए पनि तत्कालका लागि सशक्त मौसमी प्रणाली देखिएको छैन ।
स्थानीय वायुकै प्रभाव देखिएको भए पनि प्रदूषणयुक्त तुवाँलो हट्थ्यो । तर त्यस्तो कुनै प्रणाली नभएकाले तत्काल पूर्णरुपमा हटेर जाने सम्भावना छैन । प्रदूषित प्रणाली वातावरणसँग सम्बन्धित छ ।
मौसमविद्लाई त्यति थाहा नभए पनि प्रदूषणको अवस्थाबारे तुवाँलो किन स्थिर भयो भन्ने कुरा विचारणीय छ । प्रत्येक दिन मौसम परिवर्तन भइरहने कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ कुनै सिस्टमले त्यसलाई छेकिदिन्छ ।
मौसमी प्रणाली घुमिरहेको अवस्थामा त्यसकै विपरीतमा अर्को मौसमी प्रणाली घुमिरहेको छ भने त्यो प्रणालीले आइराखेको अर्को मौसमी प्रणालीलाई पनि आउन दिँदैन । छेकिदिन्छ । त्यस्तो प्रणालीलाई ब्लकिङहाइ भनिन्छ । अहिलेको मौसम ब्लकिङ हाइ भएको अनुमान गरिएको छ ।
वायुमण्डलको स्थिर अवस्थालाई भगाउन हावाको वेगहरु आउनु जरुरी हुन्छ । पानी परेर वायुमण्डलमा भएको प्रदूषणलाई तल झार्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालको लागि वायुमण्डल नै सफा बनाउने गरी पानी पर्ने सम्भावना छैन । पानी पार्ने मौसमी प्रणाली कमजोर देखिएको छ ।
चैत, वैशाखको समय भनेको हावा चल्ने समय हो । वायुमण्डलको तल्लो सतहमा राम्रोसँग घाम लाग्न पायो र तात्न पायो भने त्यसले न्यूनचापीय रेखाको उत्पादन गर्छ । त्यसले एकातिर चिसो र अर्कोतिर तातो वातावरण बनाइदियो भने अलिअलि भए पनि प्रदूषण घट्ने सम्भावना हुन्छ ।
आजदेखि बिस्तारै मौसम खुल्दै जाने अनुमान छ । अहिले हावाको गति अलि छिटो चलेको जस्तो देखिएको छ । प्रविधिले देखाएको कुरालाई आधार मानेर भन्नुपर्दा आजदेखि अलि सुधार हुने देखिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै पनि मौसमी प्रणाली नदेखिए पनि केही न केही परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । वायुमण्डल गतिशील नै भइरहेको हुन्छ । तर हामीले खासै महशुस गरेका हुँदैनौँ ।
हिउँदमा पश्चिमी वायुको प्रभाव भनिएको हुन्छ । बर्खामा जहिल्यै मनसुनी हावाको कुरा भइरहेको हुन्छ । मौसम स्थिर बस्न सक्दैन । स्थिर नभए पनि गति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । कति समयसम्म रहने भन्ने कुरा वातावरणकै तत्वहरुले निर्धारण गर्छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका कचौरा आकारको छ । यहाँ भएको हावा बाहिर गएन भने यस्तो मौसम धुम्मिन्छ । तीन, चार वर्ष अगाडि, पनि ३,४ दिनसम्म नै यस्तो खालको मौसम देखिएको थियो । मौसम सफा हुने बित्तिक्कै प्रदूषणको मात्रा कम हुँदै जान्छ ।
जनसङ्ख्या धेरै भएको ठाउँमा नै स्वाभाविक रुपमा प्रदूषण पनि धेरै हुन्छ । फेरि प्रदूषण भयो भनेर घरभित्रै बसेर पनि दैनिकी चलाउन समस्या हुन्छ । मौसम सुधार हुँदै गएमा प्रदूषण पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
मौसम अँध्यारो जस्तो भएमा, धुम्मिएको देखेमा मानिसहरु प्रलय नै आउन लागेको होकी ? वा भूकम्प पो जान्छ की भन्ने शंका गर्छन् । तर त्यस्तो सोच्नु हुँदैन । प्रदूषणसँग जोडिएर अरु अवाञ्छित घटना हुने होइन ।
वायुमण्डलमा प्रदूषण घुम्दा भने प्रदूषणका कारण अरु स्वास्थ्य समस्याहरु धेरै नै हुन्छन् । यो वर्ष हिउँदमा पनि खासै पानी परेन । प्रि-मनसुनमा पनि कम नै पानी पर्छ भन्ने अनुमान छ । प्रि-मनसुन सुरु भएको एक महिना हुनै लाग्दा पनि खासै पानी नपर्नुले यो कुरालाई सङ्केत गर्छ ।
यो वर्षको बर्खाको समयमा पानी कति पर्छ भन्नेबारे भने अहिल्यै भन्न सकिँदैन । तर नर्मलभन्दा अलि बढी पानी पर्छ कि ? भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तिम अपडेट: 2021-March-30 समय 8:27 AM